ဥရောပကားအများစုနဲ့ နည်းပညာမြင့်ဂျပန်ကားတွေမှာ အသုံးပြုလာကြတဲ့ Dual-Clutch Transmission အကြောင်း
ကျနော်တို့ကားလောက က လူတွေ ကားမောင်းသူတွေ အများဆုံးသိကြတဲ့ ဂီယာအမျိုးအစားက Manual Gear နဲ့ Auto Gear အမျိုးအစားဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းသိထားကြပါတယ်။
Manual ဂီယာဘောက်ဆိုတာကတော့ ဟိုးအရင်ကားတွေမှာပါတဲ့ Clutch နင်းပြီး ဂီယာပြောင်းရ (No.1 ၊ No.2 ၊ No.3 ၊ No.4 စသည်ဖြင့်) ဂီယာထိုးရတဲ့ ကားတွေဖြစ်ပြီး၊ အခုနောက်ပိုင်းမော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတော့ Manual Gear တွေလို အမြဲရွှေ့ပြောင်းနေစရာမလိုဘဲ ဂီယာတစ်ခါထိုးပြီးရင် အလိုအလျောက် ဂီယာအရွှေ့အပြောင်း လုပ်ပေးတဲ့ အော်တိုဂီယာစနစ်သုံး ဂီယာဘောက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။
Dual-Clutch Transmission ဆိုတာဘာလဲ?
Dual-Clutch Transmission ဆိုတာကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ Clutch ပြား နှစ်ခုပါတဲ့ ဂီယာဘောက်အမျိုးအစားပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ တကယ့်အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Manual Gear ပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ ကားမောင်းသူက Clutch ကိုနင်း ဂီယာပြောင်းစရာမလိုဘဲ အတွင်းပိုင်းမှာ Clutch နှစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး ဂီယာတွေကို အော်တိုချိတ်ဆက်ကစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ ဂီယာဘောက်အမျိုးအစားပါ။ ဒါကြောင့် ဒီ ဂီယာဘောက်အမျိုးအစားကို Automated Manual Transmission လို့လည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
Clutch တစ်ခုတည်းပါတဲ့ Manual Gearbox တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
Dual Clutch Transmission ဂီယာဘောက်အမျိုးအစားကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ သူနဲ့သဘောတရား ဆင်တူတဲ့ Manual Gear Box အကြောင်းကို အနည်းငယ်နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်ခေတ် ကားဟောင်းတွေကစလို့ ယနေ့ခေတ် အချိန်အခါထိ Manual Gear Box တွေကို သုံးစွဲနေကြတုန်းပါ။ ကျနော်တို့ ကားတွေ ရှေ့ကို ဒါမှမဟုတ် နောက်ကို ရွေ့လျားသွားလာနိုင်ဖို့ ဂီယာဘောက်တွေကို သုံးကြပါတယ်။ ဘာလို့ဂီယာဘောက်တွေကို သုံးစွဲရတာလဲဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ကားတွေမှာ သုံးနေတဲ့ ကားအင်ဂျင်တွေရဲ့ လည်ပတ်မှုစွမ်းရည်ဟာ ကားရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ဖို့ လည်ပတ်ရတဲ့ဘီးတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် လည်ပတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မရှိလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကားအင်ဂျင်တွေရဲ့ လည်ပတ်မှုစွမ်းအားကို ဂီယာဘောက်တွေရဲ့ ပင်နီယံတွေကနေတစ်ဆင့် ကားအောက်ပိုင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးမှသာ ကားဘီးတွေကို လည်ပတ်စေရတာပါ။ လည်ပတ်နေတဲ့ ကားအင်ဂျင်ကို ဂီယာဘောက်သာမပါဘဲ ကားဘီးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် လည်ပတ်မယ်ဆို အဲဒီအင်ဂျင်ကြိမ်းသေ ထိုးရပ်သွားမှာပါ။
ဒါကြောင့် Manual Gear ကားတွေမှာ ဂီယာအချိတ်အဆက်မမှန်တာတွေ၊ Clutch မနိုင်နင်းတာတွေဖြစ်ရင် ကားအင်ဂျင်ထိုးရပ် စက်သေတာတွေဖြစ်တာဟာ ဒီသဘောတရားကြောင့်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကားအင်ဂျင်ရဲ့ လည်ပတ်မှုစွမ်းအားကို ဂီယာဘောက်တွေက တစ်ဆင့်ပြောင်းလဲပြီးမှသာ အနှေးအမြန် လည်ပတ်မှုနှုန်းတွေနဲ့ ကားကို သွားစေတာပါ။
Clutch ဆိုတာကတော့ အင်ဂျင်ရဲ့လည်ပတ်မှုစွမ်းအား (Torque) ကို ဂီယာဘောက်နဲ့ အဓိက ချိတ်ဆက်ပေးတာ (ဝါ) အဆက်ဖြတ်ပေးတာကို အဓိက လုပ်ဆောင်တဲ့အရာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုခွာပေး ကပ်ပေးရသလဲဆိုရင်တော့ ကားအင်ဂျင်က လည်ပတ်နေတဲ့အချိန် ဂီယာကို ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကားအင်ဂျင်ရဲ့ လည်ပတ်မှုတွေက ဂီယာတွေဆီကို တိုက်ရိုက်ရုတ်ချည်းဝင်ရောက်သွားပြီး ဂီယာအဝင်ကြမ်းတာ ဒါမှမဟုတ် ဂီယာဝင်သွားပြီး ဂီယာရဲ့ ရုတ်တရက် ဆောင့်ရုန်းအားကို အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်း က လိုက်ပါလည်ပတ်မပေးနိုင်တာ တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး စက်ထိုးသေတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်ဂျင်လည်ပတ်နေတဲ့ အချိန် ဂီယာထိုးမယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ Manual ဂီယာကားတွေကို ကားအင်ဂျင်စက်နှိုးတော့မယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် Clutch ကိုနင်းထားပြီး အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်ကို အဆက်ဖြတ်ထားကာ အင်ဂျင်ကို စက်နှိုး အင်ဂျင်နိုးသွားမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဂီယာထိုးပြီး Clutch ကို ပြန်လွှတ်ကာ အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်ကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက် ပေးတဲ့ နည်းစနစ်နဲ့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ဂီယာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအရွေ့အပြောင်းညင်သာပြီး အင်ဂျင် ကလည်း သာသာယာယာ လိုက်ပါလည်ပတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂီယာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအပြောင်းအလဲ လုပ်တိုင်းလည်း ဒီနည်းစနစ်နဲ့ပဲ Clutch ကိုနင်းပြီး အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာ ဘောက်ကိုအဆက်ဖြတ်ကာ ဂီယာတွေ အရွေ့အပြောင်းလုပ်ရပါတယ်။
Dual-Clutch Transmission ကရော ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
Dual-Clutch Transmission ဆိုတာကတော့ Manual Gear လို ခြေထောက်နဲ့နင်းစရာ Clutch Pedal မပါဘဲ ဂီယာဘောက်ထဲမှာ Clutch ပြားနှစ်ခုပါဝင်တဲ့ ဂီယာဘောက်အမျိုးအစားပါ။ အဲဒီ Clutch တွေကိုတော့ Electronic နဲ့ Hydraulic စနစ်တွေကိုသုံးပြီး ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ပါတယ်။ Clutch ပြားနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် Clutch A နဲ့ Clutch B လို့ပဲ အလွယ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Dual Clutch Transmission မှာ ဂီယာတွေကို မောင်းနှင်ဖို့ Shaft နှစ်ခုပါဝင်ပြီး Clutch A က မ ဂဏန်း ဂီယာတွေကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ် ဥပမာ (1,3,5)။ ကျန်တဲ့ Clutch B ကတော့ စုံ ဂဏန်း ဂီယာတွေကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ် ဥပမာ (2,4,6)။
Dual-Clutch Transmission က Manual Gear ကို Auto စနစ်နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာလို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပေါင်းစပ်ထားတာလဲ ဘာအားသာချက်တွေရှိသလဲ ထပ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Manual Transmission မှာ ဂီယာတစ်ခါထိုးမယ်ဆို Clutch တစ်ခါနင်းပြီး အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာဘောက်ကို အဆက်ဖြတ်၊ ဂီယာထိုးပြီးမှ ပြန်ဆက်ပေးတာကို သိပြီးဖြစ်ပါမယ်။ ဒီလို ဂီယာတစ်ခါထိုးတိုင်း Clutch တစ်ခါနင်းရတဲ့အတွက် ဂီယာဘောက်နဲ့ အင်ဂျင်အဆက်ပြတ်ပြီး အင်ဂျင်ကနေလာတဲ့ Power တွေ ဆုံးရှုံးကာ Acceleration ဆိုတဲ့ အရှိန်အဟုန်လျော့ကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ယာဉ်မောင်းဖြစ်ပါစေ ဂီယာတစ်ခါထိုးတိုင်း အင်ဂျင်နဲ့ဂီယာဘောက် အဆက်ပြတ်ပြတ်သွားတာမို့ စွမ်းအားဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အင်ဂျင်ကနေလာတဲ့ စွမ်းအားတွေ မဆုံးရှုံးရလေအောင် Clutch နှစ်ခုပါဝင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Dual-Clutch Transmission တွေကို သုံးစွဲလာကြတာပါ။
Dual-Clutch Transmission ရဲ့ အားသာချက်က ဂီယာအရွေ့အပြောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ Manual Gear တွေလို ဂီယာတစ်ခုခြင်းအရွေ့အပြောင်းလုပ်ဖို့ Clutch အကပ်အခွာ လုပ်စရာမလိုအောင် ဂီယာတွေကို ကြိုတင် ချိတ်ဆက် နည်းကို အသုံးပြုထားတာပါ။ ဘယ်လိုကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားတာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပါ့မယ်။ Dual-Clutch Transmission မှာ နံပါတ် ၁ ဂီယာကို Clutch A ကနေ ချိတ်ဆက်ပြီး မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန်၊ နံပါတ် ၂ ဂီယာ ပြောင်းဖို့အတွက် ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားပြီးသားပါ။ အဲဒီအချိန် Clutch A က လွှတ်ပြီး၊ Clutch B နဲ့က ရုတ်တရက် ကပ်သွားပြီး နံပါတ် ၂ ဂီယာကို ဆက်လက်မောင်းနှင်ပါတယ် နံပါတ် ၂ ဂီယာနဲ့ မောင်းနှင်နေချိန်မှာပဲ နံပါတ် ၃ ဂီယာက ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်၊ အဲဒီအချိန် Clutch B က ကွာသွားပြီး Clutch A နဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်ကာ နံပါတ် ၃ ဂီယာကို ဆက်လက်လည်ပတ်စေပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ Cluch နဲ့ မချိတ်ဆက်ခင် ဂီယာတွေဟာ Free လည်ပတ်မှုပုံစံနဲ့ လိုက်လံ ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ Clutch တွေကပ်သွားတာနဲ့ ဂီယာတွေချိတ်ဆက်မိကာ လည်ပတ်စေတာမျိုးပါ။ Throttle Position တို့ ၊ Vehicle Speed တို့၊ Brake Pedal တို့အပေါ်မှာ အာရုံခံပြီး ဂီယာတွေရဲ့ အရွေ့အပြောင်းတွေကို Dual-Clutch Transmission Module ကနေ ဂီယာဘောက်အတွင်းက Clutch တွေ၊ ဂီယာအရွေ့အပြောင်းတွေကို ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်စေခိုင်းပါတယ်။ Computerize စနစ်တွေ၊ Solenoid တွေ၊ Hydraulic စနစ်တွေပေါင်းစပ်ထိန်းချုပ်ထားတာမို့ ဂီယာအရွေ့အပြောင်းကို Millisecond အတွင်းအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်သည်အထိ လျင်မြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Manual Gear တွေလို မလိုအပ်ဘဲ အင်ဂျင်ပါဝါတွေဆုံးရှုံးတာ၊ အရှိန်ကျတာတွေမဖြစ်ဘဲ၊ အရှိန်လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ချောချောမွေ့မွေ့ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး အရှိန်အတက်အကျလျင်လျင်မြန်မြန် လိုသလိုပြောင်းရွှေ့နိုင်တာမို့ နောက်ဆုံးပေါ် ပြိုင်ကားတွေ မှာပါ သုံးစွဲလာကြပါတယ်။
နောက်ဒီ Dual-Clutch Transmission တွေရဲ့အားသာချက်တခုက ဆီစားနှုန်းသက်သာစေတာပါ။ ဂီယာအပြောင်းအရွေ့မှာ အင်ဂျင်ရဲ့စွမ်းအားတွေ မဆုံးရှုံးဘဲ လျင်လျင်မြန်မြန် အရွေ့အပြောင်းလုပ်နိုင်တာမို့ ဆီစားနှုန်းသက်သာစေမှာတော့ အမှန်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီ Dual-Clutch Transmission တွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကတော့ နည်းပညာမြင့် တည်ဆောက်ရတာမို့ တန်ဖိုးကြီးမြင့်တာ၊ အပိုပစ္စည်းရှားပါးတာ၊ ပြုပြင်ရခက်ခဲတာတွေပါ။
Dual-Clutch Transmission ဂီယာဘောက်အမျိုးအစားကားတွေကို ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးက နာမည်ကြီး ကားကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးက မတူကွဲပြားတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်နေတာမို့ မျိုးတူမူကွဲ အများကြီးရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ အခုဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေကတော့ Dual Clutch Transmission နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေပါခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမ များအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝကြပါစေခင်ဗျာ။
CarsDB မှကြီးမှူးကျင်းပသည့် မန္တလေးမော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြပွဲကြီး အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်